Zvitima Travel Blog Tips, Ideas uye mari | Save A Train
Disneyland Paris kazhinji wokutanga dzakawanda Disney Park kuti mafeni zhinji kushanyira. Unoda kuziva sei kuronga zvakanaka Disneyland pazororo Paris panguva yechando uye chirimo? Zvino iwe wauya kurudyi kunzvimbo! Yaiva Marne-la-Vallee, a suburb of…
Vafambi Most doro-rudo vane Munich kumusoro zvavo kuzoita pasi. Zvinofanira kuva yakapiwa kuti Oktoberfest aizova ikoko, asi Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival anounza chinhu yokuwedzera. Aihwa, kwete mapoka evanhu. Muchava nekusangana hafu mazhinji. But the beer is double the…
Zvechokwadi Spicy uye brimming pamwe incredible siyana, yakanaka Chinese chikafu dzimwe nguva zvakaoma kuwana Europe. zvisinei, mashoko akanaka ndechokuti pane zvinokosha Chinese maresitorendi mu Europe - unofanira kuziva kuti papi, uye sei kuti ikoko….
Ava musings yangu yakanakisisa midziyo yomunzvimbo zvandakaita kunakidzwa, panguva mutsigiri wangu muAustria. Ndaivapo muzhizha 2016 nokuti mwedzi 4-angu internship panguva diki kadikidiki omunharaunda NGO. The internship Zvakaitika yakanga zvikuru, that I got to meet talented…
Kana mufambi anotaura kushanyira France, vanhu vakawanda pakarepo kufunga Paris. zvisinei, France guta handiyo chete guta unokosha kushanyira munyika ino yakanaka, Kuenda muStrasbourg ndiye IN itsva. dzimwe nzvimbo zhinji sevakasiyana kuonga zvose…
Hazvisi yapera kuronga imwe uchapukunyuka March, mberi Easter nenhokwe. With vana ari pazororo, zvino ndiyo nguva kuwana mukana wokushanyira shoma muzvitsuwa sokunofadza pamwe waunoda, embark upon the first great family adventure of…
Brisbane ndiye Queensland kuti guta uye ngairopafadzwe A-nyora zvinokwezva kufanana Sea World, ari patsangadzi akanaka uye nemapindu South Bank, uye Story Bridge uye zvakawanda - Australia kuti chakarebesa cantilever zambuko. Zvinonyaradzawo guta rokusika, pamwe unyanzvi mamiziyamu namaberere uye chic cafes…
Kuita The Most Of Nzendo Your
Vatariri ari zvose pamusoro kuongorora, kutaura veko, vachidya yomunharaunda zvokudya uye zvichingodaro. nyika yose yakasiyana pakukura uye chimiro uye zvimwe, zvichienderana kukura nyika, zvingava kana arege rakakamurwa siyana inoti. uye…
Easter Mhemberero mu Europe zvinosiyana munyika nenyika uye kubva mumaguta. Ndicho chimwe chezvinhu zvinokosha uye mukuru mitambo Church yechiKristu. Isita ndiye kupemberera kumuka kwaJesu Kristu kubva paguva. The celebration date for Easter…
Mardi Gras Jewish munhu? Enter Carnival Purimu! vanopemberera ePurimi pazuva rechi14 uye rechi15 mazuva waAdhari, pamwedzi wegumi nemiviri pamusoro Calendar Jewish rinobatana March. Purimu ane haradhi akafanana chadenga, nevanhu vanogona kunge vakapfeka zvipfeko zvavo zveSabata zvakanaka kana chipfeko chakatsiga…